Tufaaxa - Waxaan ka imid Mac | Waxaan ka imid Mac (Bogga 9)
Waxaa laga yaabaa in MacBook cusub, HomePod ay hoos u dhigaan qiimaha iyo wax ka badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Toddobaadka ugu fiican qaab jaban. Hal usbuuc ka badan waxaan soo jeedineynaa qaar ka mid ah wararka muuqda ee toddobaadkan ee aan ka imid Mac
Sida loo yareeyo cabirka nidaamka ee macOS
Haddii booska nidaamkaagu ku yaal macOS uu yahay mid fisqi ah, waa inaad fiirisaa qodobkan si aad boos ugu baneyso darawalkaaga adag.
Apple iyo Google waxay iskaga kaashadaan coronavirus iyagoo wadajira
Apple iyo Google waxay ku biiri doonaan dadaalkooda abuurista App guud si looga hortago faafida infekshinka coronavirus
Tirada macaamiisha Disney + waxay gaarayaan 50 milyan
Maqnaanshaha ogaanshaha xogta macaamiisha Apple TV +, saamiga Disney + wuxuu umuuqdaa inuu kasii socdo xoog ilaa xoog iyadoo in kabadan 50 milyan oo macaamiil ah.
Huawei horey ayey u haysatay kaarkiisa Apple: kaarka Huawei
Kaadh cusub oo loogu talagalay dadka isticmaala Huawei oo aad ugu eg Apple Card-ka caanka ah ee laga yaqaan Apple.
Podcast 11 × 30: Sugitaanku wuu sugaa
Hal usbuuc ka badan, kooxda Podcast ee loo yaqaan 'Actualidad iPhone y Soy de Mac podcast' ayaa kulmay si ay ugala hadlaan wararkii ugu dambeeyay ee Apple, in kasta oo coronavirus
30-ka Abriil Apple waxay ku dhawaaqi doontaa natiijooyinka maaliyadeed rubuca hore ee 2020
30-ka Abriil, Apple waxay ku dhawaaqi doontaa natiijooyinka maaliyadeed rubuca koowaad ee 2020, rubuca labaad ee maaliyadeed ee shirkadda Tim Cook
Waxay abuurtay sanduuq cusub oo loo maro Apple Music oo loo yaqaan 'Advance Royalty'
At Apple waxay ka sameeyeen sanduuqa hormarinta Boqortooyada taas oo ay ku bixin karaan fannaaniinta shirkadaha rikoodhada madaxa bannaan
Khariidadaha Apple ayaa dib isu soo cusbooneysiiya si Coronavirus ay u noqoto mid caawimaad badan leh
Khariidadaha Apple ayaa la jaan qaadaya baahiyaha isticmaaleyaasha ay saameysay Coronavirus, iyadoo marka hore la muujinayo meelaha lagama maarmaanka u ah adeegsadayaasha
Muusikada Amazon mar dambe uma baahna Prime in la maqlo
Amazon Music waxay u noqon doontaa bilaash dhamaan isticmaaleyaasha isla markaana Amazon Music Unlimited lacag dambe lama siin doono si ay ula tartamaan Apple Music iyo Spotify
Ogaaday nuglaansho daran Firefox
Jilicsanaan daran ayaa lagu ogaadey Firefox, sidaa darteed durba waqti ayey qaadaneysaa in la cusbooneysiiyo noocaaga biraawsarkan
Apple waxay soo saartaa maaskaro iyo shaashado si loola dagaallamo aafada
Apple waxay soo saareysaa marka lagu daro maaskaro, wajiyada gaashaanka u ah shaqaalaha caafimaadka tusaale kale oo ka mid ah kaalmadeeda dagaalka ka dhanka ah coronavirus.
Apple waxay qorsheyneysaa inay iibsato NextVR
Apple waxay qorsheyneysaa inay iibsato shirkadda NextVR oo ku takhasustay baahinta fiidiyowga oo tayo sare leh iyo xaqiiqda dalwaddii
Digniin: AirTag kaliya uma adeegi doonto helitaanka furayaasha
Digniin: AirTag kaliya uma adeegi doonto helitaanka furayaasha. Haddii aad mid ka hesho jeebkaaga jaakad, waxaad leedahay dhibaato.
Sida loogu daro sawir asalka ah Google Chrome
Ku darista sawirka asalka ah ee Google Chrome waa mid ka mid ah sababaha yar ee uu barowsarkan ugu qalmo macOS.
watchOS 7 ee carruurta, cusbooneysiinta iWork, iyo inbadan. Ugu fiican usbuuca ee SoydeMac
Hal usbuuc ka badan ayaan idinla wadaagi doonaa dhammaantiin wararkii ugu fiicnaa ee aan ka imid Mac.
Voysis, waa bilow kale oo Apple iibsatay
Apple waxay iibsataa bilowga Voysis ee ku takhasusay sirdoonka farsamada Siri wuxuu noqon karaa ka-faa'iideystaha weyn ee iibsigan
Kheyraadka Apple ee COVID-19 iyo asturnaanta
Qaar ka mid ah Senatarada Mareykanka waxay rabaan inay ogaadaan sida bogga gaarka loo leeyahay ee COVID-19 ee Apple iyo barnaamijka aruuriya xogta shakhsiga ah uu yahay.
HomePod iyo Beats oo loo soo bandhigo shaqaalaha
Apple waxay siineysaa HomePod iyo Beats, qiimo dhimis aad u macaan, iyadoo ay ugu wacan tahay xad dhaafka unugyada, in kastoo shaqaalaha kaliya ay heli karaan.
Dukaammada Apple ee Mareykanka ayaa xirmay illaa May
Apple waxay sii xiri kartaa bakhaaradeeda jirka ee kuyaala Mareykanka illaa bisha May ee soo socota
Apple wuxuu ku biirayaa sanduuqa Cuntada ee Mareykanka
Apple waxay ku biirtay mashruuca sanduuqa Mareykanka si ay cunto ugu hesho kuwa aadka ugu baahan COVID-19 dartiis
Zoom wuxuu raacayaa isla dariiqa Facebook
Beddelka kaliya ee Zoom si loo sameeyo wicitaanno fiidiyoow oo tayo leh oo kaqeybgalayaal badan ay yihiin Skype, ma jiro mid kale
Tile ayaa ka xanaaqsan Apple ku saabsan imaatinka dhow ee AirTag
Tile ayaa ka xanaaqsan Apple ku saabsan imaatinka dhow ee AirTag. Wuxuu ka cabanayaa isbeddelada iOS 13 si loo carqaladeeyo barnaamijka Tile iyo imaatinka AirTag.
Apple waxay labanlaabaysaa deeqda Shiinaha si ay ula dagaallanto Covid-19
Apple waxay sii wadaa inay bixiso waji iyo lacag si ay Shiinuhu u sii wadi karto la dagaalanka cudurka 'Covid-19' ee ka dillaaca waddanka oo si buuxda u saameeya
Browser-ka Chrome wuxuu ina xusuusinayaa inaanan ilaawin Flash ka hor dhamaadka 2020
Google wuxuu na xusuusinayaa iyadoo loo marayo Chrome dhamaadka sanadka 2020, waxaan iska ilaabi karnaa inaan awood u yeelan karno inaan furno bogagga internetka ee lagu abuuray Flash
Streamlabs OBS ayaa hadda laga heli karaa beta loogu talagalay macOS
Codsiga caanka ah ee Streamlabs OBS ee ku jira noocyadiisa 'Mac' ah ayaa hadda la heli karaa, inkasta oo uu hadda ku jiro beta.
Podcast 11 × 29: Toddobaadka saddexaad ee karantiillada iyo wararka kale
Nooc cusub oo ka mid ah Podcast-ka Apple si aad wakhti fiican ula wadaagtaan dhammaantiin oo aan uga hadlayno Apple iyo mowduucyo kale
Apple waxay sii wadi doontaa inay bixiso lacagaha ka baxsan shaqaalaha Apple Park inkasta oo aysan shaqeyn
Shaqaalaha Contrasticas ee ku bixiya adeegyadooda Apple Park waxay sii wadi doonaan inay helaan shaqadooda buuxda inkasta oo aysan shaqeyn doonin.
Sida loo abuuro loona calaameeyo PDF-ka Khariidadaha ku yaal Mac-gaaga
Sida loo sameeyo loona calaameeyo PDF-ka khariidadaha ku yaal Mac-kaaga. U dir goob calaamadeysan oo ku taal PDF sida pro-ka ka socda Mac-gaaga
Apple wuxuu sii wadaa inuu ka shaqeeyo gurigiisa qalab cusub
Soosaarayaasha softiweerka Apple waxay si adag uga shaqeeyaan guriga si ay u helaan barnaamijyada aaladaha cusub ee sanadkan la sii deyn doono.
Tani waxay noqon laheyd AirPods madow
AirPods iyo AirPods Pro oo ku jira madow uma muuqdaan inay ka mid yihiin qorshooyinka hadda Apple. Tani waa sida AirPodyadan ay u noqon lahaayeen madow
Beddel meesha ay ku taal shaashadda Mac
Shaashadda shaashada ee aan ku qaadno Macs-yadayada had iyo jeer waxay ku keydsan yihiin isla galka. Laakiin waad wax ka beddeli kartaa adoo adeegsanaya nidaamkan fudud.
Waad ku caawin kartaa soosaarahaaga Mac mashruucan Indie
Mashruuca Taageerada Indie wuxuu ku dhashay fikradda ah inuu awood u leeyahay inuu caawiyo horumariyeyaasha coronavirus dartiis aan wax jawaab celin ah ka helin codsiyadooda.
Apple TV 64GB, macOS Catalina version ugu dambeeya, iFixit MacBook Air iyo waxyaabo kale oo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Hal wiig oo dheeri ah waxaan soo qaadaneynaa uruurin yar oo ka mid ah wararka xusa todobaadka ee ka socda Mac.
Apple waxay siisaa waxyaabo gaar ah qoysaska ku kooban
Tufaaxa Apple wuxuu xushaa tan ka kooban waxyaabaha gaarka u ah qoysaska ku xeran gurigooda maadada Coronavirus
Gawaarida kumbuyuutarka ayaa ah ikhtiyaarka ugu fiican ee lagu kordhin karo wax soo saarkeena waxaana sidoo kale laga heli karaa barnaamijka Apple Books
Xaraashka xiisaha leh ee qaar ka mid ah kabo yaryar oo sita calaamadda Apple, ayaa gaadhay tiradooda 10.000 oo doolar, ka dib 20 dalab.
Degel iyo barnaamij cusub oo lagu ogaanayo Apple's Covid-19
Shirkadda Cupertino waxay bilaabeysaa degelkeeda iyo codsi si toos ah loola dagaallamayo faafitaanka Covid-19
Aqoonsiga Face-ka ee Macs-ka, patent-ka iyo qaabeynta sawirada
Aqoonsiga wajiga ayaa gaari kara Mac-yada oo patent-ku wuu tilmaamayaa, laakiin naqshadaha sawirada ee patent-ka ma ahan kuwo iftiiminaya
Cusbooneysiinta Apple Developer ee WWDC 2020
Apple Developer wuxuu noqon doonaa codsi cusub kaas oo horumariyayaashu fursad ugu heli doonaan inay soo ururiyaan dhammaan macluumaadka ku saabsan WWDC 2020
Apple waxay tijaabineysaa qalabkeeda AR iyo VR oo leh darawal la mid ah HTC Vive
Apple waxay tijaabineysaa qalabkeeda dhabta ah ee farsamada iyo kororka leh kontoroolayaasha leh naqshad la mid ah HTC Vive
Nomad wuxuu sidoo kale u jeestaa la dagaalanka cudurka faafa ee 'Covid-19'
Nomad waxay iskaashi la samaysaa soo saarista iyo qaybinta waji-xidhashada musqulaha ee maalin walba la dagaallama coronavirus-ka adduunka oo dhan
Filimkii ugu horreeyay ee taxanahan "Difaacaya Yacquub" ee Apple TV +
Apple ayaa ku daabacday kanaalkeeda YouTube, filimkii ugu horreeyay ee rasmi ah ee waxa uu noqon doono taxanaha yar ee difaaca Jacob, oo uu jilayo Chris Evans
11 × 28 Podcast: IPad Pro wuxuu hadheeyay MacBookga hawada
Hal usbuuc ka badan, kooxda Soy de Mac iyo kooxda Actualidad iPhone ayaa kulmay si ay uga wada hadlaan wararkii ugu dambeeyay ...
Apple wuxuu isku dayi doonaa inuu furo qaar ka mid ah dukaamada jirka qeybtiisa hore ee bisha Abriil
Qaar ka mid ah 458 dukaan oo shirkaddu ku leedahay bannaanka Shiinaha, Hong Kong iyo Taiwan, ayaa laga yaabaa inay albaabadooda u furmaan bisha soo socota ee Abriil
Apple waxay u siideysaa ARKit 3.5 xaqiiqo cusub oo la kordhiyay
Apple kaliya ma aysan sii deynin noocyada ugu dambeeya ee watchOS iyo macOS Catalina, shirkadda Mareykanka ayaa sidoo kale bilowday ...
1978 calaamadda Apple ayaa iska diiwaangelisay xaraashka
Xaraashka ugu dambeeya ee badeecada Apple waxaa laga heli karaa calaamadda rasmiga ee iibiyaha Apple laga soo bilaabo 1978.
Diyaarad aan duuliye wadin ayaa muujineysa lamadegaanka Apple Park
Ninka caanka ah ee la yiraahdo Youtuber Duncan Sinfield, ayaa mar kale diyaaradihiisa aan duuliyuhu wadin dul maraya Apple Park oo markan gebi ahaanba madhan.
Naqshad farsameysan iMac oo leh jajabyo caato ah iyo saldhigga 'Pro Display XDR'
Maalmahan ma aha wax adag in la sameeyo soo bandhig animated wanaagsan. Waxaad fadhiisaneysaa iMac hortiisa, male-awaalkaagu ha duulo, iyo ...
Xaddidaadda iibsiyada qaarkood ee websaydhka Apple way baaba'aysaa
Apple waxay dib u soo ceshan laheyd keydka alaabada ay soo iibsato waxayna baabi'ineysaa xadidaadyada qaar ee iibsiga internetka
Ka taxaddar phishing iyo tabarucaad been abuur ah sababtuna tahay Covid-19
Maalmahan waa inaan ka badinaa amniga kahortaga khiyaamada deeqaha oo aan iska ilaalino been abuurka isku dayaya inuu nagu soo dhex dhuunto si aan u xafidno xogteena
Disney + sidoo kale waxay yareyn doontaa tayada adeegeeda sida Apple TV +, Netflix, YouTube iyo Amazon Prime
Marka Disney + ay safarkooda ka bilowdo Spain iyo wadamada kale ee Yurub berri, 24-ka Maarso, ma sameyn doonto iyada oo tayada asalka ah ay ka kooban tahay.
Barta shaqsiyeed ee laga helo iPhone-ka illaa Mac ayaa fashilmeysa
Qaar ka mid ah dadka isticmaala waxay soo sheegaan dhibaatooyinka ku jira xulashada barta shakhsi ahaaneed iyo Apple waxay kugula talineysaa in sixitaanka uu imaan doono macruufka soo socda
MacBook Airs cusub, Mac minis cusub, iPad Pro cusub iyo waxyaabo kaloo badan. Ugu fiican usbuuca ee SoydeMac
Qalabkan cusub ee ay soo saartay shirkadda Apple toddobaadkan ayaa kali ku ah wararka maanta oo Axad ah 22-ka Maarso. New MacBook Air, Mac mini iyo iPad Pro
Amazon Prime Video sidoo kale waxay yareysaa tayada waxyaabaha ay ka kooban tahay sida Netflix, YouTube iyo Apple TV +
Iyadoo la raacayo Amazon Prime Video, waxaa horeyba u jiray 4 shirkado fiidiyoow ah oo soo dejinaya kuwaas oo hoos u dhigay tayada adeegyadooda si ay u xaalufiyaan internetka Yurub
Beddelida shixnadaha loogu talagalay noocyada cusub ee 'MacBook Air', 'iPad Pro', iyo noocyada 'mini mini'
Apple waxay badaleysaa MacBook Air, Mac mini iyo iPad Pro oo ay ahayd inay u dirto macaamiisheeda moodooyinka cusub ee la soo bandhigay todobaadkan
Apple TV + ayaa sidoo kale yareyn doonta tayada fiidiyowga
Hoos u dhaca tayada fiidiyaha ee soo dejinta adeegyada nuxurka ayaa sii kordhaya. Waxay umuuqataa in ciidamada isticmaalka badan ay qaadaan talaabooyinkan
Sida looga saaro barnaamijyada miiska wadaagga ee macOS
Ka takhalusida codsiyada lagu muujiyey qaybta saamiyada waa nidaam aad u fudud oo aan hoos ku faahfaahinayno.
Apple wuxuu bilaabi karaa 12,9-inch iPad Pro leh shaashad yar oo LED ah sanadkaan gudihiisa
In kasta oo uu soo bandhigay jiilkii afraad ee iPad Pro toddobaadkan, Apple wuu naga yaabin karaa deyrta oo wuxuu bilaabi karaa qaab cusub oo leh shaashad yar oo LED ah.
Tim Cook wuxuu ku dhawaaqayaa deeqo dheeraad ah si loola dagaallamo Covid-19
Apple oo uu weheliyo Tim Cook hogaamiyaha ayaa doonaya inuu ka caawiyo deeqo badan wadamada si loola dagaallamo cudurka faafa ee coronavirus
Netflix iyo YouTube waa kuwii ugu horreeyay ee hoos u dhiga tayada fiidiyowga ee ka kooban waxyaabaha ay ka kooban yihiin
Waa muhiim in la ilaaliyo isgaarsiinta shabakadda lana ilaaliyo xasilloonida shaqada telefishanka, sidaa darteed YouTube-ka ayaa sidoo kale yareynaya tayada fiidiyaha
Isha ku hay kormeerkaaga waxqabadka ee Mac waqti ka waqti
Hubi Kormeeraha Waxqabadkaaga Mac waqti ka waqti. U fiirso mararka qaarkood si aad u aragto in dhammaan howlaha ay si caadi ah u shaqeynayaan.
IPad Pro 2020 waxaa maamula 6 GB oo RAM ah
Dhamaan noocyada cusub ee iPad Pro waxaa maamula 6 GB oo RAM ah, afarta jiil ee Apple bilaabay 2018.
Waqtiga rarka ee AirPods waa la soo gaabiyey
Waqtiga rarka ee AirPods waxyar baa loo dhimayaa, badanaa sababta oo ah soo kabashada yar ee Shiinaha
Beddelka ugu wanaagsan ee kumbuyuutarka cusub ee iPad Pro 2020
Apple waxay soo bandhigtay waxa u noqon kara kumbuyuutarka saxda ah ee iPad Pro, laakiin Logitech ayaa la tartami doona waana mid aad u adag adiga
Filimkii masraxa ee Beastie Boys Story ayaa la joojiyay
Documentary-ga kooxda Beastie Boys ee ay Apple qorsheyneysay inay ku sii deyso tiyaatarada, ayaa si toos ah ugu imaan doona adeegga fidinta fiidiyaha ee Apple.
Podcast 11 × 27: IPhone 9 iyo 9 Plus waa dhow yihiin
Waxaan la wadaageynaa dhacdo cusub oo ah PodcasApple si aad waqti baashaal ah noogula qaadato oo aan iskaga dhigno Coronavirus xoogaa ...
Waa rasmi hadda. Sonos S2, wuxuu noqon doonaa firmware kaliya qalabka cusub
Sonos ayaa xaqiijisay in Sonos ay bilaabi doonto firmware cusub S2 xagaaga kaas oo kaliya la jaan qaadi kara aaladaha cusub
CarPlay waxay ku siin kartaa macluumaad badan isticmaaleha
CarPlay, oo ah nidaamka ay Apple ku kordhinayso iPhone-ka gaariga dhexdiisa sidaasna ay ku heli karto ...
Ka faa'iideyso tags raadintaada Tooska ah
Ka faa'iideyso tags raadintaada Tooska ah. Faylasha kooxda isla qoraalka qoraalka isla markaana waxaad ku qori kartaa Spotlight.
Dukaanka Apple wuu xirnaan doonaa ilaa amar dambe
27-kii Maarso, Apple Stores waxaa loo qorsheeyay inay albaabada u furaan adduunka oo dhan, taariikhdaas oo aan dib loo dhigin ayaa dib u dhacday.
Halkaan ka hel sawirrada WWDC 2020
Halkan waxaad kala soo bixi kartaa dhammaan waraaqaha waraaqaha ee la xiriira Shirka soo socda ee Apple Worldwide
iPhone iyo Macintosh ayaa ugu sareeya liiska 100 Naqshad Ugu Fiican Fortune
iPhone iyo Macintosh ayaa ugu sareeya liiska 100 Naqshad Ugu Fiican Fortune. Majaladda caanka ah ee Mareykanka ayaa soo daabacday liiska naqshadaha ugu wanaagsan xilligan casriga ah.
Sii deynta AirPods Pro Lite waa la daahi karaa
Warbixin cusub ayaa ka digaysa in AirPods Pro Lite-ka cusub ay dib u dhigi karto bilowgeeda suuqa sababo la xiriira caanka iyo Coronavirus.
Apple waxay ka jawaabaysaa shakiga laga qabo xidhitaanka dukaamada.
Apple waxay ka jawaabtaa su'aalaha badanaa la isweydiiyo ee ka dhashay xiritaanka dukaamada. Mid ka mid ah kuwa ugu badan ee la codsado waa maxay waxa ku saabsan muddada soo noqoshada?
Shaqaalaha kambaska Culver City ee ka tirsan kambuyuutarka Apple wuxuu ku tijaabiyaa cudurka coronavirus
Shaqaalihii labaad ee Apple ee tijaabiya wax ka ogaanshaha coronavirus wuxuu ka shaqeeyaa Apple Music iyo Apple TV + xarunta magaalada Culver
Apple waxay ku ganaaxday 1.100 milyan oo yuuro falalka ka dhanka ah kalsoonida
Ganaax lacageed oo malaayiin doollar ah oo ay soo rogeen Hay'adda Tartanka Faransiiska ayaa gaadhaysa 1.100 milyan oo yuuro
Taageerada iyo mahadnaqa Apple ee adeegyada gurmadka
Apple waxay qadarinaysaa shaqada ay qabteen howlaha gurmadka iyo dadka intiisa kale ee la dagaalamaya Covid-19 coronavirus
Barnaamijyada COVID-19: Kaliya laga helo ilo rasmi ah.
Apple waxay si xad dhaaf ah dib-u-eegis ugu samayn doontaa dukaamada arjiyada si aan midna looga helin wax ku saabsan COVID-19 oo aan ka iman ilo rasmi ah.
Powerbeats-ka cusub ee 4 ayaa hadda lagu iibinayaa Walmart
Malaha cillad awgeed, Powerbeats 4 ayaa hadda laga heli karaa mid ka mid ah dukaamada Walmart County New York
Lacag bixinta bishii Maarso ee Apple Card, dib loo dhigay
Apple oo ay weheliyaan Goldman Sachs ayaa qaatay go’aan ah in dib loo dhigo eedaha bisha Maarso dadka isticmaala Apple Card isla markaana dib loo dhigo iyada oo aan dan laga lahayn.
Dareemida culeyska dhiigga, AirTags iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Toddobaadkan waxaan haynaa dhowr war oo xiiso leh waxaanan dooneynay inaan iska dhigno Covid-19 kuwa ugu caansan
Bill Gates wuxuu ka tagay guddiga maamulka Microsoft
Aasaasihii, iyo saaxiibkii Steve Jobs, Bill Gates, ayaa ku dhawaaqay inuu ka tagayo guddiga agaasimayaasha shirkadda Microsoft oo ay diiradda saarayaan samafalka.
Apple wuxuu xirayaa dhammaan Dukaamada Apple meel ka baxsan Shiinaha illaa 27-ka Maarso
Dhibaatada adduunka ka jirta ee uu coronavirus u maleynayo, ayaa ku qasabtay Apple in la xiro in ka badan 500 dukaamo oo ay ku leedahay adduunka oo dhan
Apple waxay xireysaa dhammaan dukaamada Apple ee Spain
Dukaammada Apple ee Spain kuyaala ayaa xirnaa ilaa ogeysiis dheeri ah coronavirus awgeed. Qiyaas la sii odorosay oo hadda socota
WWDC 2020 waxay noqon doontaa "khibrad khadka tooska ah oo cusub"
Apple waxay xaqiijineysaa in WWDC 2020 aan la joojineynin laakiin ay badaleyso qaabka coronavirus darteed. Sannadkan wuxuu noqon doonaa khibrad cusub oo khadka tooska ah ah
Dhamaan Bakhaarrada Apple ee Shiinaha ayaa hadda u furan dadweynaha
Apple waxay hada ka furtay 4ta dukaan ee Shiinaha ilaa iyo hada u xirmay coronavirus darteed.
Microsoft ayaa joojisay dhismaha Microsoft bishii May sababo la xiriira shirkadda 'Covid-19'
Dhacdooyinka horumariyaha Microsoft ee loo qorsheeyay bisha Maajo ayaa loo joojiyay cudurka coronavirus ka dillaacay
Coronavirus wuxuu kaloo wax yeeleeyaa The Morning Show
Taxanaha Apple TV + The Morning Show wuxuu joojiyaa duubitaankiisa mudo labo todobaad ah si uu isugu dayo inuu isaga difaaco coronavirus
Filimka labaad ee dokumenteriga ah Beastie Boys Story
Documentary ku saleysan taariikhda kooxda muusikada ee Beastie Boys, oo uu hogaaminayo Spike Jonze, ayaa la sii deyn doonaa Abriil 2. Intaan ku raaxeysan karno trailer-ka ugu horreeya
Podcast 11 × 26: Dhammaan faahfaahinta ku saabsan iOS 14
Hal usbuuc ka badan, kooxda Soy de Mac iyo iPhone Actualidad ayaa kulmay si ay uga wada hadlaan wararkii ugu dambeeyay ee la xiriira Apple.
Xeerar cusub oo ku yaal Apple Store si looga hortago faafitaanka coronavirus
Xeerar cusub oo ku yaal Apple Store si looga hortago faafitaanka coronavirus. Beddelka batteriga iyo jeermiska jirka ee iPhone-ka oo loogu talagalay 55 Euros: Tani waxay igu dhacday Isniinta
Apple wuxuu muujinayaa qaabka hufnaanta ee AirPods Pro fiidiyowga
Apple ayaa ku daabacday YouTube fiidiyow cusub oo muujinaya habka hufnaanta iyo joojinta buuqa ee AirPods Pro
Toddobaadkan dhammaadkiisa, dhammaan Bakhaarrada Apple ee ku yaal Talyaaniga ayaa albaabada loo laabay coronavirus darteed
Toddobaadkan dhammaadka ah, dhammaan Bakhaarrada Apple ee ku yaal Talyaaniga ayaa albaabada loo laabi doonaa iyadoo la raacayo awaamiirta dowladda Talyaaniga ee ah in la xakameeyo cudurka loo yaqaan 'coronavirus'.
Apple AirTags waxaa maamuli doona baytari la beddeli karo
Wararkii ugu dambeeyay ee la xiriira Apple AirTags, waxay soo jeedinayaan in aysan ku soo dari doonin batari dib loo soo celin karo, laakiin ay ku jiraan batteriga CR2032
Maanta shirkadda Apple waxaa laga joojiyay magaalooyinka Mareykanka qaarkood
Maanta At dhacdooyinka Apple waxaa laga joojinayaa magaalooyinka Mareykanka qaarkood maaddaama cudurka Coronavirus uu sii kordhayo
Sidee looga bixiyaa cinwaanka emaylka adoo adeegsanaya Boosta
Si fudud uga-saar liiska liistada ee ka socda barnaamijka macOS Catalina Mail
Sonos wuu saxayaa ugu dambayntiina "qaabka dib u warshadaynta" ayaa si fiican u beddelaysa
Ugu dambeyntii Sonos wuxuu hagaajiyaa "habka dib-u-warshadaynta" ee ku hadlahooda oo uusan meel fog ka xiri doonin af-hayeenkii hore markii isticmaaluhu adeeggan adeegsado.
Shaqaalaha Apple Park waxay kula taliyeen inay guryahooda ka shaqeeyaan coronavirus darteed
Apple waxay kula talin doontaa shaqaalaheeda inay ka shaqeeyaan guriga oo aysan aadin Apple Park sababo la xiriira fayraska Covid-19
New Powerbeats4 Sawirro qarsoon
Warbaahin Jarmal ah ayaa daabacday sawirradii ugu horreeyay ee sida uu noqon doono Powerbeats4, iyadoo nashqad aad ula mid ah Powerbeats Pro.Waxaa lagu heli doonaa 3 midab.
Apple waxay sharfeysaa jiilka soo socda ee haweenka hoggaamiyeyaasha
Apple, oo lagu sharfayo maalinta caalamiga ah ee haweenka, waxay lashaqeeyaan Gabdhaha Kuwa Xeerka si loo muujiyo shaqada hoggaamiyeyaasha haweenka mustaqbalka
Websaydhka Apple wuxuu noqdaa tixgelin dumarka
Apple waxay u hibeysay boggeeda oo dhan si loogu dabaaldego Maalinta Haweenka. Daboolka qaar ka mid ah dumarka ugu khuseeya adduunka
Si buuxda u shaqeynaya Apple-1 ayaa u kacda xaraashka magaalada Boston
Apple-1 oo si buuxda u shaqeyneysa ayaa lagu xaraashay Boston. Mid ka mid ah 200 kombuyuutar ee ugu horreeyay oo ay sameeyeen Steve Wozniak iyo Steve Jobs ayaa u kacaysa xaraashka.
Soo kabashada suuqa saamiyada, hordhaca bangiga iyo waxyaabo kale oo badan. Ugu fiican usbuuca ee SoydeMac
Toddobaadkan waxaan haynaa warar muhiim ah iyo warar xan ah oo ku saabsan Apple iyo wax soo saarkooda. Halkan waxaan kaaga tagaynaa qaar ka mid ah
SXSW, oo Apple ay ku dhawaaqday in aysan ka qeyb galeynin, waa la joojiyay
Ka dib markii ay joojisay ka qeyb galka SXSW ee shirkadaha waaweyn, SXSW waxaa lagu qasbay inay joojiso dhacdada sanadkan.
Apple wuxuu la wadaagayaa guriga ugu horeeya ka hor Trailer mugdi ah Apple TV +
Apple waxay ku daabacday kanaalkeeda YouTube filimkii ugu horreeyay ee taxanahan 'Home Before Dark', oo ah wax soo saar u gaar ah, oo soo bixi doona Abriil 3
Cilad cusub oo ku jirta Intel chip-ka Mac-daada, oo aan la sixi karin
Jilicsanaan cusub oo ku jirta Intel chips markanna xal looma hayo. Layaab ma leh in Apple ay rabto Mac-keeda cusub inay ku dhejiso ARMs
Masuuliyiinta California waxay ku talinayaan Apple inay joojiso soo bandhigitaankeeda maadada coronavirus darteed
Dunida oo dhan waxaan la kulannaa dharbaaxo daran oo ka timaadda fayraska coronavirus. Masuuliyiinta Santa Clara waxay kula talinayaan Apple inaysan qaban munaasabadaha
Runta ha loo sheego taxanaha dib loo cusbooneysiiyay xilli ciyaareedkii labaad
Taxanaha Apple TV + Truth Be Told ayaa dib loo cusbooneysiiyay xilli ciyaareedkiisii ​​labaad, in kasta oo markii hore loo qorsheeyay inuu yahay taxane yar.
Apple wuxuu ku guuldareystay inuu racfaan ka qaato ciqaabta isticmaalka shatiyada Caltech
Rafcaanka ay Apple u soo bandhigtay xukunka ee ku amartay inuu bixiyo 838 milyan oo shirkadda Caltech oo ah xadgudub sharciyeed, ma uusan helin guul laga filayo.
Khariidadaha Apple ee mustaqbalka ayaa tusi kara soo jeedimaha halka loo socdo ama waxa la arko
Khariidadaha Apple waxaa ku jiri kara talo soo jeedinno halka la aado ama waxa la arko, iyadoo kuxiran xaaladdaada ama safaradiinnii hore.
Falanqaynta Teknolojiyada Safari 102 hadda waa diyaar
Apple ayaa soo saartay nooc cusub oo ah biraawsarkeeda tijaabada ah, Safari Technology Preview. Nooca 102 ayaa hadda la heli karaa.
Xanta ku saabsan imaatinka Apple Pay ee Mexico ayaa si rasmi ah loo beeniyay
Imaatinka suurtagalka ah ee Apple Pay ee isticmaalayaasha bangiga Banregio de México waa la diiday. Bangiga laftiisu wuxuu soo saaraa qoraal uu ku beeninayo wararka
Podcast 11 × 25: Coronavirus wuxuu joojiyaa wax walba
Waxaan dhammaantiin idinla wadaageynaa dhacdo cusub oo ka mid ah barnaamijkeenna toddobaadlaha ah ee Podcast. Xaaladdan oo kale, mawduucyo dhowr ah oo wanaagsan iyo dabcan, coronavirus ...
Apple waxay ka baxday SXSW halkaas oo ay qorsheyneysay inay ku soo bandhigto barnaamijyadeeda soo socda ee Apple TV +
Apple waxay shaacisay inay joojineyso kaqeyb galkeeda SXSW, iyo sidoo kale Amazon, Facebook, Twitter, Intel iyo kuwa kale, waana dhacdo ilaa hada aan loo baajin coronavirus-ka
Toddobaadkan dhammaadkiisa, Dukaanka Apple ee ku yaal Bergamo ma furi doono albaabbadiisa coronavirus awgeed
Dukaankii ugu horreeyay ee Apple uu albaabada u laabo coronavirus-ka awgiis wuxuu ku yaal Bergamo, Italy, mana aha go’aanka Apple.
Disney +: waxaan kuu sheegeynaa wax walboo aad ubaahantahay inaad ogaato
Weli ma ogi Disney +? Waxaan kuu sheegeynaa sirta adeegga socodka cusub ee ujeedkiisu yahay inuu la tartamo Netflix. Maxay yihiin hubkaaga si aad u gaarto?
Shaqaalaha Apple sidoo kale ma awoodaan inay u safraan Talyaaniga iyo Kuuriyada Koofureed
Apple waxay kordhisay xayiraadaha safarka sababo la xiriira coronavirus-ka Talyaaniga iyo Kuuriyada Koofureed, halkaas oo kuwa uu ku dhacay virusku ay ku bateen
Google I / O oo si rasmi ah loo joojiyay coronavirus awgeed Maxaa ku dhici doona WWDC?
Dhacdada Google, Google I / O waxaa si rasmi ah shirkaddu u joojisay dhibaatooyinka uu keenayo covid-19 maxaa ku dhici doona WWDC?
Warka wanaagsan ee Apple u leh wax soo saarka ku kordhay Foxconn
Foxconn waxay si rasmi ah ugu dhawaaqeysaa in dhamaadka bishaan Maarso soosaarka uu noqon doono heerar caadi ah, kuwa teknolojiyaddu neefsadaan.
OPPOWatch-ka cusub ayaa sidoo kale lagu dhejiyay Apple Watch
Saacadda ay soo bandhigtay OPPO waa nuqul ka mid ah Apple Watch. Waayahan dambe, soosaarayaashu waxay dadaal yar ku bixinayaan nashqadaha ay iyagu wataan
Apple wuxuu sii daayaa beta afraad ee macOS 10.15.4 iyo tvOS 13.4
Apple waxay soo saartay beta-kii afraad ee macOS 10.15.4 iyo tvOS 13.4 iyo kuwa kale. Kaliya waxaa heli kara kuwa wax dhisaya, waxaan u dhownahay beta bulshada
Bishii Maarso Apple ayaa kubilaabanaysa khaasatan Maanta kal-fadhiyada Apple: "Waxay abuuraan"
Apple wuxuu bilaabayaa taxane ah 5.000 oo cusub Maanta kal-fadhiyada Apple ee loogu magac daray "Waxay Abuuraan." Iyaga dhexdooda haweenka hal abuurka leh ee adduunka ayaa noqon doona jilayaasha
Suuqa saamiyada ayaa soo kabanaya: Apple waxay kordhisaa qiimaha saamiyadeeda
Saamiyada Apple waxay bilaabeen inay sare u kacaan qiimaha suuqyada maaliyadeed. Waxay bilaabaan inay dib uhelaan kalsoonida inkasta oo coronavirus-ku uu sii wado firfircoonaanta
Xukuumadda Trump waxay soo faragelisay dowladda Hindiya si Apple ay u furato bakhaarro u gaar ah
Qorshayaasha balaarinta ee Apple ayaa la hagaajiyay bilihii la soo dhaafay iyada oo ay ugu wacan tahay faragelinta maamulka Trump ee dowladda Hindiya.
Warbixinta ASPI waxay ku eedeysay ganacsatada Apple inay ka faa’iideystaan ​​Uyghurs
Warbixinta ASPI waxay ku eedeyneysaa alaab-qeybiyeyaasha Apple inay ka faa’iideysanayaan shaqaalaha Uyghur warshadooda Shiinaha
Sida dib loogu dajiyo Launchpad marka uusan si sax ah u shaqeynaynin
Iyadoo loo marayo Launchpad, waxaan marin u helnaa mid kasta oo ka mid ah codsiyada aan ku rakibnay Mac-geyna, ...
Apple wuxuu furey xisaabta ganacsiga 'Clearview AI', sida ay ku sameysay Facebook ama Google
Apple waxay ka shaqeysay koontada horumariyaha shirkadda 'Clearview AI' ee jabinta heshiisyada barnaamijka u gaarka ah
Tot loogu talagalay Mac. Kaabis aad u fiican oo ku socota Notes-ka Apple
Tot waa codsi bilaash ah oo loogu talagalay macOS kaas oo kaa caawin doona inaad qoraaladaada ku haysato helitaan deg deg ah oo fudud oo aad kaga yaabin doonto fudeydkiisa
Toronto waxay horey u haysatay dukaanka Apple Store labaad oo shaqeynaya
Apple wuxuu ka furayaa dukaanka Apple dukaanka magaalada Toronto. Dukaan casri ah oo gebi ahaanba dib loo naqshadeeyay iyadoo lagu saleynayo mid hore. Natiijada dhamaadka waa mid cajiib ah.
Shaqaalaha Apple ee Shiinaha ayaa shirkaddu kharribtay
Apple waxay u diraysaa xirmooyin gargaar oo isugu jira sahay caafimaad, raashin iyo Ipad dhamaan shaqaalaha loo wado cudurka dilaaga ah ee Coronavirus ee ka dilaaca Shiinaha.
Sannad guurada Steve Jobs, oo ah processor u gaar ah Mac iyo wax ka badan. Ugu fiican usbuuca ee SoydeMac
Hal wiig oo dheeri ah ayaan kula wadaageynaa dhamaan waxyaabaha muhiimka ah ee aan ka imid Mac.
Xayaysiiska Cusub ee Apple Japan "Mac-ga gadaashiisa" wuxuu ururiyaa dhowr Caanood oo Caan ah
Xayaysiiska cusub ee Apple Japan "Behind the Mac" wuxuu ururiyaa dhowr anime oo caan ah. Waa muuqaal isku xigxiga oo ka socda anime oo caan ka ah dalka Japan.
Apple wuxuu diyaariyaa taxane ah kor u kaca iyo dhicitaanka WeWork
Kordhinta iyo dhicitaanka WeWork waxay ka muuqan doontaa taxane laga heli doono Apple TV.
Apple waxay la shaqeeyaan Ed Farm si ay u keenaan xaqiiqda lagu kordhiyay waxbarashada.
Apple waxay adeegsan doontaa qalabkeeda dhabta ah ee la kordhiyay oo ay weheliso Ed Farm waxay u adeegi doontaa inay bilowdo qaab cusub oo horumar waxbarasho ah
Coronavirus iyo Apple: Ciyaaraha la mamnuucay, yididiilada Tim Cook iyo WWDC 2020
Warar kala duwan ayaa ka soo baxay oo la xiriira coronavirus iyo Apple. Qaar ka mid ah oo iska hor imaan kara.
Dukaankii ugu horreeyay ee rasmi ah ee Apple Store ee Hindiya laga furo 2021
Tim wuxuu xaqiijiyay in Bakhaarkii ugu horeeyey ee Apple ee Hindiya uusan albaabadiisa furi doonin sanadkaan, in kastoo Apple Store Online furi doono.
Xaraashka Waxsoosaarka Apple Cusub Oo Ay Kujiraan Warqad Uu Saxeexay Steve Jobs
Tan iyo dhimashadii Steve Jobs, qaar badan ayaa ahaa alaabihii u soo baxay xaraashka oo ay saxiixeen ...
Imtixaanada gawaarida iswada ee Apple ayaa hoos u dhacay
Waxay u muuqataa in sanadkii hore 2019 Apple ay si weyn u yareeysay tijaabooyinka wadada iyadoo ay la socdaan gawaaridooda iswada
Euter router-ka Amazon wuxuu la jaan qaadayaa HomeKit
Aaladda Amazon ee Eero iyo Eero Pro waxay durbaba si buuxda ula jaan qaadayaan HomeKit iyo heerka amniga ee ay Apple ka dhex hirgelisay.
Bob Iger wuxuu iska casilay xilkii agaasimaha shirkadda Disney markii uu ka tagay shirkadda Apple sababo la xiriira khilaaf xagga danta ah
Ka dib markii uu ka degay guddiga agaasimayaasha Apple, Bob Iger hadda ma ahan agaasimaha guud ee Disney: waxaa la gaadhay xilligii uu hawlgab noqon lahaa.
Beta-saddexaad ee macOS 10.15.4, tvOS 13.4 iyo watchOS 6.2 oo diyaar ah
Hadda waxaa loo heli karaa soo dejinta oo kaliya loogu talagalay horumariyeyaasha nooca saddexaad ee beta macOS 10.15.4, Apple TV 13.4 iyo watchOS 6.2
Podcast 11 × 24: Heerka Google, iPhone 12 iyo in ka badan
Qayb cusub oo ka mid ah barnaamijka 'Soy de Mac' iyo 'Actualidad iPhone Podcast' ayaa hadda laga heli karaa YouTube, Spotify, iVoox iyo Google Podcast
Johnson & Johnson iyo Apple waxay bilaabeen daraasad si loo yareeyo khatarta istaroogga
Fursadaha ay bixiyaan barnaamijyada oo ay weheliyaan aaladaha sida Apple Watch iyo iPhone ayaa loo isticmaalaa in lagu wanaajiyo caafimaadka dadka.
Apple Support waxay bixisaa fiidiyoow leh marino kala duwan oo loo maro macOS Catalina
Apple waxay kudareysaa fiidiyow cusub fiidiyooyin dhowr ah oo qabow oo loogu talagalay macOS Catalina kanaalka YouTube Apple Support.
Coronavirus: Tallaabooyinka Kahortagga Shirka Apple ee Saamilayda
Coronavirus: Apple waxay ka codsaneysaa saamilayda dhawaan u safray Shiinaha ama meelaha dhibaatada ka jirto inaysan ka soo qeyb galin kulanka saamileyda ee soo socda
Xafiisyo cusub oo Apple ah oo ku dhow Madison Square Garden
Apple waxay leedahay heshiis kiro ah oo aad ugu dhow halyeeyga Madison Square Garden.
In kabadan kalabar dukaamada Apple ee Shiinaha ayaa durbaba furan
Apple wuxuu sii wadaa inuu si tartiib tartiib ah uga furo bakhaarradiisa Shiinaha laakiin howlaha caadiga ah iyo kuwa caadiga ah ee taariikhahaan waxay ku kici doonaan inay soo kabtaan
Apple mar dambe kama dacwoon karto dagaalka patent-ka ee ka dhanka ah VirnetX
VirnetX waxay umuuqataa in 10 sano kadib ay ku guuleysatay dagaalka sharciyeed ee ka dhanka ah Apple ee ku xadgudubka shatiga VPN iyo FaceTime
Apple waxay u dabaaldegi doontaa maalinta haweenka iyada oo loo marayo "Waxay Abuurtaa"
Apple waxay u dabaaldegi doontaa Maalinta Haweenka Adduunka iyada oo la daabacan doono daabacado gaar ah oo Maanta ka dhacaya Apple adduunka oo dhan, iyada oo ay ku hoos qoran tahay "She Creates."
Steve Jobs ayaa maanta noqon lahaa 65 sano
Steve Jobs ayaa maanta noqon lahaa 65 sano. Sawirka Apple marwalba wuxuu kuxiranyahay Steve iyo kan kale. Labada fikradood si gooni ah looma fahmin.
Router-ku-habboonaanta HomeKit way adkaan doontaa in la rakibo
Apple waxay sheegaysaa in router-yada la jaan qaada HiomeKit ay ku soo dhowaanayaan oo ay sii kordhayaan isla markaana ay amniga kordhin doonaan laakiin waxay noqon doontaa mid aad u adag in la qaabeeyo.
Apple-I, PowerBook 190cs oo ay saxiixeen shaqooyin, iyo in ka badan ayaa u kici doonta xaraashka bisha Maarso
Bisha soo socota ee Maarso shirkadda xaraashka ee RR waxay xaraali doontaa Apple-I oo ku jira xaalad aad u wanaagsan oo ay weheliso PowerBook oo uu saxeexay Steve Jobs
AirFlay: Sida loo is waafajiyo AirPods-ka (Pro) iyo PlayStation 4.
Adeegso samaacadahaaga AirPods (Pro) sida qalabka PlayStation 4 mahadnaqa qalabka AirFly. Xal wanaagsan haddii aad leedahay dhagaha dhageysiga Apple
Ku bilaw inaad qaadatid talaabooyinkaaga ugu horeeya ee naqshadeynta garaafyada barnaamijyadan
Ma jeceshahay naqshadeynta garaafka? Ha seegin xulashada barnaamijyadan si aad u qaabeyso una qaabeyso adoo adeegsanaya Mac. Midkee ayaad doorbideysaa?
2 Dukaan oo cusub oo Apple ah ayaa albaabada u furay Shiinaha, wadar ahaan waxay noqonayaan 17
2 Dukaan oo cusub oo Apple ah ayaa lagu daray 15 kii Apple horay uga furtay Shiinaha, iyadoo lagu daray wadar ahaan 17 ka mid ah 42 dukaan oo uu Apple ku qaybiyey Shiinaha.
Goor dhow u imanaya Apple TV +: Swan Song, oo ay jileyso Mahershala Ali.
Apple iyo Anonymous Content waxay la midoobeen Mahershala Ali oo ku guuleystay Oscar si ay u toogtaan Swan Song. Filimka cusub ee soo bixi doona guga.
Soo-saarista AirPods, MacBooks iyo Apple Watch ayaa u guuraya Taiwan
Apple waxay ka fikireysaa inay u soo rarto wax soo saarkeeda wax soo saar badan Taiwan, si looga fogaado dhibaatooyinka dhanka wax soo saar ee ay kala kulmaan Shiinaha.
10 Bakhaar oo cusub oo Apple ah ayaa dib looga furay Shiinaha
Apple waxay ka furaysaa Shiinaha 10 dukaan oo cusub, marka lagu daro 5 ka mid ah ee uu furay dhowr maalmood ka hor oo loo xiray coronavirus-ka
Sida loo daabaco ama loo keydiyo Kalandarka PDF-ka ee loogu talagalay Mac
Waxaan ku tusineynaa sida aad u keydin kartid ama u daabacan kartid Jadwalkaaga Mac-da ee PDF-ka si fudud oo dhaqso leh
Sida looga helo saameynta Crossfade ee Mac-gaaga Apple Music
Haddii aad rabto inaad ku ciyaarto Apple Music-gaaga saamaynta Crossfade, casharradan waxaan ku tusi doonaa sida looga sameeyo Mac-gaaga
Podcast 11 × 23: Fayrasyada ku jira macOS?
Hal usbuuc ka badan waxaan soo qaadaneynaa podcastapple si aan dhamaantiin idinla wadaago wararka ugu fiican ee usbuuca adduunka Apple iyo in ka badan
Waxaan arki karnay qalin Apple oo wata astaamo dareemayaal ah
Apple waxay xareysay patent na tusaya inay ka shaqeyneyso fikradda ah in la sameeyo qalin qalin Apple ah oo leh astaamo dareemayaal ah.
Apple Music waxay saxiixday halyeeyga Warner Music
Apple waxay sii wadaa inay ka shaqeyso isku dayga inay laxiriirto isticmaaleyaal badan waxayna shaqaalaysiisay maamulihii hore ee Warner Music Group si loo xoojiyo dadaallada caalamiga ah.
Apple waxay laba jibaartay deeqda si ay ula dagaallanto coronavirus
Tim Cook ayaa e-may u diray shaqaalihiisa isagoo ku wargaliyay in kaalmadii ay Apple u qoondeysay la dagaalanka coronavirus la laba jibaaray.
Sida loo xannibo xiriirada boostada qaab fudud
Waxaan ku tusineynaa sida ugu dhaqsaha badan uguna fudud ee loo xannibo dirayaasha aan loo baahnayn ee ku jira codsiga boostada hooyo ee Apple, Mail
Apple waxay xaqiijineysaa in coronavirus uu saameyn doono dakhliga soo gala sedexdii biloodba
Apple waxay ku soo bandhigayaan war rasmi ah warka aan maalmaha badan ku aragnay wararka xanta ah ee ah in coronavirus uu saameyn ku yeelan doono dakhligooda seddexdii biloodba mar.
Shixnadaha caalamiga ah ee kombiyuutarada ayaa hoos u dhacaya sababo la xiriira Covid-19
Shixnadaha MacBookga iyo kombiyuutaro kale oo noocyo kale ah ayaa hoos u dhici doona marka la eego tirooyinka sababo la xiriira cudurka 'coronavirus' ee ka dilaacay Shiinaha.
Ku raaxayso muusikada aan jecel nahay ee laga heli karo Pandora oo ka socda Apple Watch hadda waa suurtagal
Codsiga muusikada Pandora wuxuu noo ogolaanayaa inaan ku raaxeysano muusikada aan jecel nahay si toos ah curcurka aan ula leenahay Apple Watch LTE
Apple Edge Cache: Ganacsiyadu waxay awoodi doonaan inay si dhakhso leh u shaqeeyaan
Adeeg cusub oo ka socda Apple ayaa iftiinka arkay. Apple Edge Cache ayaa hadda loo heli karaa ganacsiyada ballan-qaadaya bixinta-dhow ee isla markiiba.
Hadda waxaad ka eegi kartaa gaadiidka dadweynaha ee Barcelona iyo magaalooyinka kale ee Khariidadaha Apple
Apple waxay ku dartay xulashada gaadiidka dadweynaha ee magaalada Barcelona. War wanaagsan oo Khariidadaha Apple u soo dhowaanaya Khariidadaha Google
Apple waa inay siisaa shaqaalaheeda Apple Store waqtigooda dheeriga ah
Apple waxay ku qasbanaan doontaa inay lacag siiso shaqaalaha Apple Store waqtiga maalgashiga dhamaadka maalintooda si ay u maraan talaabooyinka amniga ee khasabka ah
MWC waa la joojiyay, HomePod raqiis ah iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Joojinta MWC ma dareemi doonto inaan ka imid Mac sida inta kale ee wararka ugu fiican toddobaadkan
Dagaalka u dhexeeya Apple iyo Nuvia ayaa cirka isku sii shareeraya
Dacwada udhaxeysa Apple iyo Nuvia waxaa xoojiyay sheegashooyinka cusub ee shirkada ay aasaaseen shaqaalihi hore ee shirkada Californian
Little America oo ku taal Apple TV +. Sidee aamusnaan karaa in ka badan erayada
Apple wuxuu kor u qaadaa cutubka aamusnaanta ee taxanaha Little America. Dhacdo la toogtay iyadoo aan la sheegin hal sadar oo wadahadal ah.
Linksys router ayaa heli doona taageerada HomeKit dhowaan
Linksys waxay ku dhawaaqeysaa qaabkeeda Linksys Velop Model waxay ku dari doontaa Apple HomeKit waafaqid Cusbooneysiin Cusub
Tani waxay noqon doontaa guriga caqliga leh ee mustaqbalka sida ay sheegtay Apple
Apple wuxuu sii wadaa inuu diiwaangaliyo shatiyadaha kiiskanna waa mid ka mid ah midka la xiriira Homekit iyo guriga caqliga badan
5 Apple Store oo ku taal Shiinaha ayaa albaabada loo furi doonaa berri
Dhammaan dukaamada Apple, oo ah 42 jir, oo Apple ay ku qaybisay Shiinaha, waxay albaabada u laabteen bilowgii bishii Febraayo cudurka loo yaqaan 'coronavirus', ...
Apple waxay dhaaftay Microsoft oo ah shirkadda ugu qiimaha badan
Apple ayaa markale gaadhay heerkii ugu sareeyay abid ee qiimaha saamiyadeeda waxayna noqota shirkada leh qiimaha ugu saraysa suuqa ee ka sareysa Microsoft.
Sida loo daro tilmaamaha sirta ah shaashadda galitaanka ee macOS
Haddii aan dooneyno kooxdayadu inay noo sheegaan waxa furaha soo galitaanka kooxdeena uu noqon karo, ka dib waxaan ku tusaynaa tillaabooyinka la raacayo.
Foxconn waxay dooneysaa inay wax soo saar ka bilowdo kala badh warshaddeeda dhamaadka bisha Febraayo
Waxaa laga yaabaa inay shaqadu ka bilaabato warshadaha Foxconn ee ku yaal Shiinaha dabayaaqadii bishii Febraayo ama horraantii Maarso, warshadaha ay xireen coronavirus
Podcast 11 × 22: Coronavirus wuxuu gaaraa tiknoolajiyadda
Hal usbuuc ka badan, waxaa naloogu qasbay inaan ka hadalno coronavirus-ka iyo cawaaqibka ay ku yeelanayso waaxda tikniyoolajiyadda ...
Dhaqdhaqaaqaada Kaarkaaga Apple sidoo kale qaab ah OFX
Haddii aad haysato Kaarka Apple waa inaad ogaataa inaad u dhoofin karto xogtaada kaliya qaab CSV laakiin sidoo kale gaar ahaan OFX
Qalabka Smart Security ee Adobe ayaa hadda la jaan qaadaya HomeKit
Adobe ayaa sii deysay cusbooneysiin firmware ah si ay uga dhigto Aaladda Amniga Amniga Smart Smart-ka mid la jaanqaadi kara barnaamijka 'Apple's HomeKit platform' hadda.
Dagaalkii udambeeyay ee Apple ee ka dhanka ahaa VirnetX dib looma tijaabin doono
Apple waxay la kulantay VirnetX patent troll ilaa 2010. Maadaama ay yihiin kiisas patent, kuwani badanaa waxay qaataan sanado badan ...
Haddii tabka Chrome uu horeyba ugu xumaa Mac, eeg waxa 6.000 ay sameeyaan
Maanta waxaan ku tusineynaa hal tijaabo oo kale oo aan ka badneyn xaqiijinta in Google Chrome ay tahay in laga ilaaliyo Mac inta ugu macquulsan.
Ming-Chi Kuo wuxuu leeyahay wax soo saarka Apple wuxuu halis ugu jiraa coronavirus
Ku soo noqoshada caadi ahaan soo saarista wax soo saarka Apple iyo shirkadaha intiisa kale ee Shiinaha waxaa saameynaya cudurka loo yaqaan 'coronavirus'
Labo kabood oo kabo yaryar ah oo ka yimid 90-meeyadii oo leh astaanta Apple ee xaraashka
Dhamaadka bisha Maarso, laba kabood oo sita calaamadda Apple oo lagu daabacay oo ay leedahay shaqaale shirkadeed ayaa u kici doona xaraashka.
Isticmaal xakamaynta codka si aad u maamusho Mac-gaaga
Ka macOS Catalina waxaan kaheli karnaa xakamaynta codka barnaamijkeena Mac-kan. Baro inaad ula isticmaasho dhamaan shaqooyinkiisa.
Sida loogu daro cinwaanka Outlook.com emailkaaga Mac
Haddii aad rabto inaad ku yeelato koonto emayl ahaan Muuqaalka gudaheeda ah oo ku saabsan arjiga boostada ee Mac-gaaga, raac tugorila-kan fudud
Jilicsanaan go'an, mushaarka Wozniak iyo waxyaabo kaloo badan. Ugu fiican usbuuca ee SoydeMac
Toddobaadkan waxaan haynaa dhowr war oo xiiso leh oo ku saabsan Apple oo had iyo jeer waxaan ku soo lifaaqnaa qaar ka mid ah waxaan ka imid Mac
Apple waxay dooneysaa inay ku tijaabiso moodooyinka GPS-ka cusub Apple Park
Apple waxay soo gudbisay iyada oo u mareysa injineerkeeda naqshadeynta nidaam ogolaansho ah in lagu tijaabiyo howlaha cusub ee GPS ee Apple Park
Horumariyayaashu waxay awood u yeelan doonaan inay abuuraan codsiyo u gaar ah dugsiyada
Apple iyada oo loo marayo bayaan iyada oo loo marayo websaydhka horumariyeyaasha ayaa u oggolaan doonta iyaga inay u abuuraan codsiyo khaas ah dugsiyada
Ma cadda in Apple ay dib u fureyso dukaamada Shiinaha 10-ka Febraayo.
Apple ma cadda inay ka fureyso Shiinaha dukaamada xiran coronavirus darteed. Warku wuxuu ka yimid gacanta Dreidre O'Brien
Apple Watch wuxuu iibiyaa wax ka badan dhammaan warshadaha saacadaha Switzerland
Markii ugu horreysay, Apple waxay la wareegtay warshadaha saacadaha tan iyo markii ay suuqa ku dhufatay 2015, iyagoo soo diraya noocyo badan oo Apple Watch ah 2019 marka loo eego dhammaan warshadaha saacadaha Switzerland.
Teknolojiyadda Dolby Altmos waxaa laga heli doonaa barnaamijka Apple TV ee telefishanka LG
Teknolojiyadda dhawaaqa ee Dolby Atmos waxay u iman doontaa qaar ka mid ah TV-yada shirkadda LG soo saarta iyada oo loo marayo cusbooneysiinta dhammaadka sanadkan.
2025, Apple TV + waxay yeelan doontaa 26 milyan oo macaamiil ah
5-ta sano ee soo socota, tirada macaamiisha u ah adeegga Apple TV + waxay noqon doontaa 26 milyan, koritaan ka hooseeya sidii markii hore la filayay.
Mushaarka Steve Wozniak ee shirkadda Apple waa $ 50 asbuucii
Shaqaale Apple ah oo sii ahaanaya, Steve Wozniak wuxuu mushaar ahaan usbuucii qaataa $ 50.
Sameecadaha dhegaha ee Apple ayaa lagu qabtay patent
Apple waxay fayl gareysaa patent-ka qaar ka mid ah dhegaha-dhegaha iyo dhegaha dhagaha leh oo aad iyo aad u caqli badan.
Apple waxay isku diyaarineysaa ololaha "Ku Noqoshada Dugsiga" Japan
Shirkadda Cuperitno ayaa bilaabi doonta berri dalabyada dib loogu soo celin doono fasalka iyada oo la adeegsanayo Macs iyo Ipad sida jilayaasha. Hadiyadaha hadiyadaha ah ilaa $ 165
Ciladda amniga ee aaladda Philips Hue oo u oggolaaneysa xakamaynta ogolaansho la'aan
Waxay u nuglaadeen nalalka Philips Hue ee u oggolaanaya isticmaalkooda iyada oo milkiilaha uusan awoodin inuu ka hortago.
Shirkadda Spotify waxay gaaraysaa 125 milyan oo macaamiil ah oo bixiya
Tirada isticmaaleyaasha barnaamijka muusigga ee qulqulaya ee Apple waa 271 milyan, oo 125 ka mid ah la bixiyo.
Isla markiiba ku xiro Chrome toobiye cmd + Q
Ugu talagal ahaan, waa inaad riixdid amarka + Q laba ilbiriqsi si aad uhesho Chrome. Dami si aad u noqoto mid deg deg ah oo ka fogow xaaladaha ceebta ah.
Podcast 11 x 21: Xanta iyo warar xan badan
Hal todobaad oo dheeri ah ayaan dhamaantiin idiin soo gudbineynaa Apple Podcast oo wata warar kala duwan, xan iyo macluumaad kale oo la xiriira Apple iyo wax soo saarkooda
Shirkadaha shiinaha ee shiinaha ayaa dib u bilaabaya wax soo saarkooda 10-ka Febraayo
Shirkadaha shiinaha ee shiinaha ayaa dib u bilaabi doona wax soo saarkooda 10 bisha febraayo. Taasi waa haddii dowladda Shiinaha aysan kordhinin fasaxyada sannadka cusub.
Shaqaalaha SAP waxay doortaan Mac iyo macOS Catalina shaqo
Kordhinta isticmaalka Macs iyo macOS cusbooneysiinta Catalina OS ee SAP laba jibbaar 15 bilood kadib